Tag: nyocha google | Martech Zone
You maara na ihe dịka 93% nke ndị ọrụ na-amalite ahụmịhe sọfụ weebụ ha site na iji kọmputa ede ajụjụ ha n’ime igwe nchọ ihe? Onu ogugu a aghaghi iju gi anya. Dị ka ndị ọrụ ịntanetị, anyị na-agba nkịtị ka mma nke ịchọta kpọmkwem ihe anyị chọrọ n'ime sekọnd site na Google. Ma anyị na-achọ ụlọ ahịa pizza mepere emepe nke dị nso, nkuzi banyere otu esi ejikọta, ma ọ bụ ebe kachasị mma iji zụta ngalaba aha, anyị na-atụ anya ozugbo
Sunday, June 4, 2017 Sunday, June 4, 2017 Douglas Karr
Keyzọ dị mkpa iji melite ogo gị n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkwa na nyocha ọ bụla ma ọ bụ nyocha mpaghara bụ ijide nyocha ndị na-adịbeghị anya, ugboro ugboro, na pụtara ìhè. Iji mee nke ahụ, ị ​​ga - eme ka ọ dịrị ndị ahịa gị mfe! Chọghị ịjụ ha ka ha chọta gị na saịtị ma debe nyocha ahụ. Chọ bọtịnụ nyocha ahụ nwere ike ịbụ ihe na-akụda mmụọ. Yabụ, ụzọ kachasị mfe iji jide nyocha ndị ahụ bụ